पञ्चपुरीमा नगरप्रमुख चढ्ने सरकारी गाडीमा कार्यकर्ताको रजाई, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गाडी छोड्न सिडियोको दबाब ! – Enayanepal.com
पञ्चपुरीमा नगरप्रमुख चढ्ने सरकारी गाडीमा कार्यकर्ताको रजाई, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको गाडी छोड्न सिडियोको दबाब !
२०७६, ९ चैत्र आईतवार मा प्रकाशित
पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चढने बा २ झ ३४९७ नम्बरको गाडी शनिबार दुरुपयोग भएको छ । शनिबार विहान पूर्व मन्त्री तप्तबहादुर विष्ट सहितको टिमलाई लिएर विद्यापुर क्रस गरेको गाडी साँझ फर्किने बेला विद्यापुर प्रहरी चौकीको नियन्त्रणमा परेको हो ।
‘विहान प्रहरीले चकपोस्टमा रोक्न खोज्दा खोज्दै गाडी भागेको थियो ।’ प्रत्यक्षदर्शीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘पछि प्रहरीले साझँपख फर्कदा गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।’ श्रोतका अनुसार गाडी प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले गाडी छोडन भनेर दबाब दिएपनि प्रहरीले भने छोडेन । ‘प्रहरी उपरीक्षकले यदि फोन गरेको भए प्रहरलिे उतिबेलै गाडी छाड्थ्यो कि ?’ स्थानीय प्रकाश कंडेलले भने, ‘असई शेरसिंह धामीसँग कुरा भएको मैले सुनेको थिएँ, उनले हाकीमबाट आदेश नआएसम्म गाडी छोडन सकिदैन भनेर जवाफ दिइरहेका थिए । गाडीको कागजात नआएसम्म गाडी नछोडने उनले बारम्बार साब भन्दै जवाफ फर्काइरहेका थिए ।’ फर्किने बेलामा गाडीमा आठ नम्बरका वडा अध्यक्ष भक्त प्रसाद पौडेल र ड्राइभर मात्रै थिए । स्थानीयका अनुसार उक्त सरकारी गाडी नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता ओसार्न बारम्बार प्रयोग भइरहेको हो । शनिबार पूर्व मन्त्री विष्टलाई पु¥याउन गाडी प्रयोग भएको भएपनि यो नै पहिलोपटक नभएको स्थानीयको भनाई छ ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रमेश न्यौपानेले भने आफू आएदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाले अनुमति लिने काम नगरेको बताए । ‘मसँग अनुमति उहाँहरुले लिनु भएको छैन । मैले बुझे अनुसार उहाँहरुले नै अनुमति दिने काम गर्नु भएको जानकारीमा आयो ।’ उनले घुमाइ फिराई प्रहरी चौकीमा फोन गरेको स्वकिार गरेपनि समाउन र छोडन दबाब नदिएको बताए ।